Me RAKOTOMAVO RAZAFIMANANTSOA HANITRINIAINA : TSY MAINTSY TONGA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
Nitatitra ny zavamisy eo anivon’ny Cst tamin’ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny filoha lefitry ny Cst ny Me Rakotomavo Razafimanantsoa Hanitriniaina. Nisy hoy izy, ny fivoriana ara-potoana tao amin’ny Cst natrehinay. Mazava fa niditra tao amin’ny rafitra Cst izahy satria fiaraha mitantana no natao. Nisy fotoana aza hoy izy mijery fotsiny isika fa tamin’ity indray mitoraka ity dia tsy nijery fotsiny fa nilalao film. Nahita izahay hoy Me Hanitra tao fa hay kay ireo rehetra mpomba ny fitondrana dia manohitra azy. Nilaza ireo hoe tsy izao no nifanarahana, tsy izao no nitolomanay teto. Be dia ny halatra ao amin’io fitondrana io, toy ny tao amin’ny Sheritt, nisy ny volalany be dia be ao izay tsy misoratra amin’ny ministeran’ny teti-bola. Ny any Atsimo hoy izy dia famonoana olona. Raha fehezina hoy ity filoha lefitry ny Cst ity, dia efa atodik’izy ireo any aminy ny basy. Isika niaritra ny mafy dia izy ireo ao no miteny azy. Nentina tany ny ady tety an-kianja ary tena niady izahay fa tsy miadiady, ary tsy mifampitsitsy fitenenana. Io ministry ny vola io dia anisan’ny olana lehibe amin’ny fampandehanana ny Cst ary atombotsika amin’io ny fanesorana. Ny zavatra tsy fantany hoy Me Hanitra dia nisy ny didy napetraky ny ministra teo aloha izay mamaetraka ny « avatange » miompampana. Miova indray izany taty aoriana ka nihena ny tombontsoa. Raha niditra tao kosa anefa ny Ankolafy Ravalomanana dia tsy resaka avatange. Ny tsy nahazo hoy izy dia nitabataba. Ny antony hoy izy dia ngezabe ho antsika ny zava-niseho, fa tsy fantatra hoe hay kay ireto olona ireto mba olombelona tonga saina ihany, ary ireny olona ireny mba afaka mierietreitra ity firenena ity. Isaorako hoy Me Hanitra, ireo namana Ankolafy Ravalomanana izay nandray anjara mavitrika tamin’ny adihevitra rehetra natao fa tafatoetran’ny Ankolafy Ravalomanana tao amin’io andrimpanjakana io ny hoe rehefa tsy mahomby ny fitondrana dia misy ny fepetra tsy maintsy horaisina. Misy fepetra maro be horaisina ary hanaovana « resolution » mivoaka amin’io Cst io. Maromaro ihany hoy ity olom-boantendry ity, ny « signataire » ny tondrozotra ao anatin’io Cst io. Ireo olona ao anatin’io Cst ireo izay nanao Sonia ny tondrozotra no tomponandraikitra amin’ny fametrahana ny olona rehetra manomboka any amin’ny faratampony ka hatrany amin’ny zavatra vao natsangana vao hainga dia ny Cenit. Rehefa tomponandraikitra amin’ny fametrahana ny prezidàn’ny tetezamita ianao, amin’ny fametrahana ny PM, prezidàn’ny Cst, tsy resahina hoy izy ny prezidàn’ny Ct fa izy tsy kitikitihana. Dikan’izany dia manana adidy rehefa tsy mety ny zavatra atao mamaky batsilana ny zavatra tsy mety rehetra fa tsy iray tsikombakomba amin’ny zavatra ratsy. Navoakan’izy ireo daholo hoy Me Hanitra ny zavatra tsy nety rehetra, ka dia misy ilay « resolution » raisina dia ny Ankolafy Ravalomanana mametraka tsara satria anisan’ny zavatra noresahina tao amin’io Cst io. Nivoaka hatramin’ny hoe maninona rehefa ny Vpm ao anaty governemanta no kitikitihan’andriamatoa Alain Ramaroson dia mitsangana ny governemanta iray manontolo, ary miteny hoe misy ny « solidarité governementale ». Ary maninona rehefa isika Cst ko kitihana dia tsy misy « solidarité Cst ». Nanapa-kevitra nanaomboka omaly hoy izy, fa misy ny « solidarité » ny Cst iray manontolo n’inon’inona zavatra mitranga. Nitsangana ny namana Naika Eliana dia nanambara hoe rehefa mitaky izay « solidarité » izay ary ianareo dia izao ny anay Ankolafy Ravalomanana. Ndao daholo ianareo rehetra ho « solidaire « aminay amin’ny fampiharana ny tondrozotra. Ampiharintsika ny andininy faha 20 sy 45. Nanaiky daholo hoy Me Hanitra ny mpikambana hoe ndao ary fa ho tanterahintsika amin’ny antsipiriany io tondrozotra io manomboka izao. Izahay Akolafy Ravalomanana ary anisan’izany ny tenako hoy izy, satria ao anatin’y birao maharitra ka ataontsika ngidragilo io, ary tazonintsika amin’ny vavany ireo, mody ny filoha Ravalomanana Marc satria izay no tapaka tamin’ny andininy faha 20. Ny mpikambana ao amin’ny Cst Ankolafy Ravalomanana hoy izy dia hiteny tsy hitsahatra. Ho hitantsiaka eo izay fa rehefa tsy tanteraka izany dia haintsika ny manao azy. Ireny lalàna rehetra ireny hoy ity mpisolovava ity, dia efa niteny izahay fa be dia be ny lalàna tsy mety nolaniana tao ka ho avy izahay amin’ny angady sy harona. Ny prezidàn’ny Cst hoy izy niteny hoe ny ahy tondrozotra dia ny vahoaka 20 tapitrisa. Eo izahay hanery izany zavatra izany satria tsy moramora ny niatrehany ny mpikambana ao main’ny Cst omaly sy afak’omaly. Ny anay na izany na tsy izany dia tsy misy miova ny tanjona na vola inona na vola inona omena anay eo fa ny anay raisinay amin’ny ara-dalàna ihany fa tsy hisy iray tsikombakomba amin’ny ratsy. Ny ankoatra izay hoy Me Hanitra dia misy ny miteny hoe ianareo izay miaraka homana ao , salobokomana. Novalianay hoy izy hoe tsy mila « drap » na bodofotsy ka hanao salobokomana aminareo izahay fa izahay telo taona sy tapany tsy nihinan-kanina velona foana, ka izao izahay vao hanao izany. Izany rehetra izany hoy ity olom-boantendry ity, dia tsy maintsy mila fanazavana ho antsika rehetra satria isika tsy voaloto’izay zavatra tian-dry zareo ho lotoina.
Ny prezidàn’ny Cst hoy izy amin’izoa fotoana izao dia nailiky ny ao Ambohitsorohitra satria tonga saina izy fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny nifanarahana. Hanakaiky izao ny fifidianana ka raha ohatra hilatsaka ilaikely dia tsy maintsy misy manolo. Ny solony hoy Me Hanitra dia ny filohan’ny Cst, ny filohan’ny Ct ary ny PM, izay prezidà « collegiale ». Tsy atokisana ilay prezidàn’ny Cst hoy izy fa tsy maintsy hametrahana olona atokisana. Amintsika hoy ity mpanao politika mpisolovava ity, dia tsy mety izany. Noho izany antony izany no maha légaliste antsika. Tsy manaiky atao fitaovana ary tsy manaiky ny tsindry hazo lena . N’aiza n’aiza toerana nandehananay hoy izy rehefa tsy mety dia tsy maintsy tenenina fa tsy ekena ary tsy maintsy miady. Izahay tsy mahazo zavatra raha tsy miady, ary efa zatra miady ary miady hatramin’ny farany. Hatramin’izoa izahay mbola miady. Ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc hoy izy tsy maintsy azontsika io ary tsy maintsy vintantsika na iza hanakana na iza tsy hanakana. Efa niteny isika hoy Me Hanitra, hoe tsy misy ny Plan B izany fa ny filoha Ravalomanana Marc ihany no kandidantsika. Tsy misy kandida faharoa izany. Ny Plan B kosa misy raha ohatra ka misy olona mierietreritra fa hanao ny tsy mety amin’ny fodian’ny filoha Ravalomanana. Efa noporofointsika izany hoy izy tamin’ny 21 janoary. Isika tsy nikorontana teto. Rah any hatezeran’ny olona eran’ny Tanana izay ratsy noho ny 26 janoary 2009. Aleo hoy izy hamerina izay hamerina fa hoe misy Notam indray any . Izaho hoy Me Hanitra tsy mbola nahita ilay izy fa aleo hanao. Efa fitondrana tsy izy io ary izy aza efa miteny fa fitondrana tsy mandeha amin’ny tokony ho izy io. Niverimberina hoy izy tao amin’ny fivorianay fa hoe fitondrana tsy izy io, leo izahay , aleo ny ireo miala, aleo miaraka amin’ny vahoaka manongana toy izay miaraka amin’ny fitondrana ka aongan’ny vahoaka. Izahy hoy Me Hanitra tsy zatra manongana fa ny ara-dalàna ary rehefa mila any ianreo dia izay manan angady sy harona. Hainay ny miaraka main’ny vahoaka.
17 pensées sur “Me RAKOTOMAVO RAZAFIMANANTSOA HANITRINIAINA : TSY MAINTSY TONGA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA”
Ary tsy mety ve raha i me Hanitra no mirotsaka ho fidiana filohampirenena rehefa mbola tsy tafody aloha président???? Ny firenena vahiny izay tena mila ny haren’ny madagasikara mintsy no hita fa tena manakana ny fodiany eto ankotra ireo foza moa izany
Mazava be Me Hanitra a! Izao ve izany izy vao mahatsapa fa tsy mety ny nataon’i Andry RADOMELINA sa efa ho lany ny saosy vao miverin-dàlana? Tadidio fa io Dolin io ihany no namporisika ny olona niakatra teny Ambohitsirohitra! Ny lasa tsy fanadino, ka sao dia mba te-hanadio tena fotsiny!
Raha ohatra anefa moa izy manaiky tsy misy fepetra ny hampodiana an’i Dada sy hilatsahany ho fidiana dia azo akipy ihany ny maso,… Tsy milaza anefa izany fa ho adino ny zava-bitany!
Izany eo ihany fa ireto vozongo mpanohana an’i Domelinia ireto no tena tsara sakanana tsy hiditra INTSONY amin’ny raharaham-pirenena.
TSY ZANA-TANY INTSONY ISIKA KA MIANDRY IZAY HOLAZAINY SY ATORONY FOANA !
Le retour au Pays du Président RAVALOMANANA MARC devient obligatoire compte étanttenu de la situation socio-économique et alimentaire ddes Malgaches qui a « choqué » la délégation militaro-civile de la SADC , Son compte – rendu a été a mentionné :
_l’extrême pauvreté des Malgaches,
_l’incurie des soi-disant dirigeants,
_le retard u même l’absence de décision ,car les putchistes sont en pleine déconfiture et en pleine division
Pour vite remédier à cette catastrophe , le reour du Président fait l’unanimité de la Communauté internationale y compris la France , qui a rejoint la
thèse de la SADC
Les bailleurs de fonds et les les Pays qui aident financièrement Madagascar pour son développement sont prêts à aider Madagascar
Le Président RAVALOMANANAMARC lance un appel urgent aux Malgaches de respecter la tolérence , de préparer unis et cohérents des élections démocratiques , libres à tous ceux qui jouissent de leur civique pour se porter candidats , et que candidat établissent clairement son programme pour permettre aux Malgaches de choisir celui ou celle apte et digne de diriger le Pays..
Que cet élu soit bien élu afin de donner confiance aux financiers(balleurs de fonds , Pays qui aident )
Ce qui est sûr c’est que Le Président RAVALOMANANA MARC sera candidat à la présidentielle , qui ne peut être organisée sans sa participation à cette élection !
Le Président de la République RAVALMANANA MARC lui-même annoncera son retour !
trimobe ahhhhhhhh>>> mazava be io tenin’ny vahoaka entin’i Me Hanitra io, « TSY MISY PLAN B IZANY » tokana ny kandida antsika, dia ny filoha Ravalomanana Marc ihany ka » TSY MISY FIFIDIANANA IZANY ETO RAHA TSY MODY IZY ARY MAHAZO MILATSAKA HO FIDIANA » >>> dia aleo tsy mamorona resaka hafa intsony fa tsy misy afa tsy izay ihany no TOLONA IRAISAN’NY VAHOAKA MALAGASY REHETRA. Ny hevitra hafa ankoatra izay dia hevitra asosoky ny fozaorana tsy tia an’i Dada izay midika ho tsy tia tanindrazana sy tsy tia ny handrosoan’ny firenena.
Ry Andry tsy tia domelina a! ka efa impiry zay hoe hody zay tsy tafa mintsy h@ zao. Ary efa hita fa ilay vahiny mahazo tombotsoa mintsy no tsy manaiky izay hiverenany eto. Maninona ary no tsy maka décision mintsy ny sadc e! ny internationale rehetra e! mikasika ny hoe fodian’ny président fa toa miandry ny caprice ny fat eto daholo, miampy ny mahazo ny vahoaka any antsimo ny insécurité ny fahantrana tsy misy tia halala an’izany fa dia zara ary mitohy ny crise hitsetsefana ny gasy e! Ka raha ohatra ve misy olona mitovy hevitra @ président fa hamonjy ny vahoaka malagasy tsy haleo ve izay no mirotsaka toy izay ny fat ihany no hitondra eo?
Ohatra ny mety be ilay hevitr’i Tromobe iry aloha iry an!!!
Dia miditra moramora fotsiny i dada rehefa voalaminy ny raharaha,
satria raha ity volakakafotra ity tsy mietsika io e!!!sady izy vehivavy no ao anaty lalana, io sarindiky io
anie matao-behivavy e!!sady ny vehivavy ihany koa no mahasahy mijoro e!!( misy hitsovalana indray
eo izao) hihiiii
Eny ho aho aky
Rehefa mbola miteraka olana ve mo ny fahatongavay tsy aleo mametraka ny toky eo amin’ny filohan’ny tetezamita aloha mandra-pa?r
daouda efa hita ange fa azo tsy misy fotony ilay dj e!
Daouda aaaaaa!!mankahery tena sa mamahan-dalitra?TAHOTRA tsy ferana!!
Ratsimilaho !!!MDR be za !!dia misaotra nanohana ny vehivavy e!!!
« ny vehivavy ihany koa no mahasahy mijoro e » !
La société idéale, un monde au féminin !! Une société où les putschistes femmes sont devenues ou considérées comme de vénérables BIENFAITRICES ! Tsy ho ela intsony ê, efa an-dalana izao ny malagasy !
Pisse & Love ihany no ady eo ! Oh, iza no iza ?
T@ voalohany nijery ity Film-nao aho ry Kintana dia MDR fa avy eo
tena narahako fa hay tena fiainana , mampanofinofy fa hay ny biby
tena manam-panahy lavitra noho ny olombelona????indrisy fa inona ity enjean-draolombelona eto
ambonin’ity tany ity???efa tsy mahalala izay tena fiainana intsony ny olona raha heverina an!!!
MAHONENA!!!!!Tiako be ilay film fa feno FIFANKATIAVANA SY FANAJANA ARY FITIAVANA tsy
misy fiatsaram-belatsia mazava ho azy. » Manonofy aho! » Mankasitraka lesy a!!!
Dia tsy ho ela ve izany ranavalona kopan-kopan « miaraka » amin’i DSK ? Tsy ilay vazaha (quoique…) fa ilay Dombo without Quality !!!! Tsssssssss !!! Tsy mba hoe legalista !!!
Hitanao ilay « mody mandaka kely » ? Hi hi hi !!!
Etat de Droits, respect des Droits de l’Homme et de ses valeurs au sens noble du terme, dia milamina ny fiainana ê !
Indrisy fa mbola lavitra ny lalana ahatongavana @’izany filaminana izany.
aiza ny olona no tsy handrevy ny fiainan’ireto biby ampitoniana feno FITIA hihi( MDR)
na dia ny fikarakarany ilay zanany aza !firifiry izao ny zaza mijaly ary tsy mahamenatra ireo RAD ny MIVAROTRA
ny zanany fa tsy musy hamelomana azy ireo???na biby aza ireo tsy mifamono tsy mifandrafy tsy mifangalatra tsy
mila vola, vola ihany anie no anton’izao habibiana sy fandrobana tsy msy fiheverana mamotika ny tanindrazana izao e!
RAHA MBA NISAINA LAVITRA NOHO IRETO GIDRO IRETO IREO FOZA TSY NISY IZAO FAHAVOAZANA MIANJADY
ny vahoaka mALAGASY IZAO.
Précédent Article précédent : FILOHA RAVALOMANANA : NANAMBARA HO RE TANY HO REDANITRA NY FILATSAHANY HO FIDIANA
Suivant Article suivant : VOT : NY FILOHA RAVALOMANANA MIVERINA SY MIROTSAKA NO VAHAOLANA